Fifaninanana iraisam-pirenena : Afaka mandray anjara amin’ny « Onebeat 2018 » ny mpanakanto malagasy -
AccueilVaovao SamihafaFifaninanana iraisam-pirenena : Afaka mandray anjara amin’ny « Onebeat 2018 » ny mpanakanto malagasy
Fifaninanana iraisam-pirenena : Afaka mandray anjara amin’ny « Onebeat 2018 » ny mpanakanto malagasy
07/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Afaka miara-dia ny kolontsaina maroloko. Anisan’ireo firenena 45 afaka mandray anjara amin’ny fandaharan’asa « Onebeat 2018 » ny mpanakanto malagasy. Fifaninanana iraisam-pirenena izay hitrandrahana ny talentan’ireo mpanakanto hamorona sy hitrandraka ny mozika ho fitaovana hanatsarana ny fiarahamonina. Afaka mandray anjara amin’ity « onebeat » andiany faha-7 ity ny mpanakanto malagasy eo amin’ny sehatry ny mozika toa ny mpihira, mpitendry, mpamoron-kira, mpanoratra… ary 19 ka hatramin’ny 35 taona. Ny 9 febroary ho avy izao no fe-potoana farany amin’ny fisoratana anarana. Tsy misy ny fifantenana mivantana atao eto Madagasikara fa avy hatrany dia ry zareo mpikarakara no manao ny fifantenana amin’ny alalan’ny santionan’ny sangan’asa sy ny antontan-taratasy takiana amin’ny mpifaninana. Ny faran’ny volana mey 2018 no ho fantatra ireo mpanakanto 25 voafantina hitondra ny talentany amin’io tetikasa io. Ny 12 septambra ka hatramin’ny 14 oktobra kosa no hanatanterahana ny atrikasa famoronana sy fifanakalozana any Etazonia, izay arahina fampisehoana maromaro. Mandritra io iray volana io, dia azon’ireo mpandray anjara ihany koa ny manolotra ny tetikasany manokana, ny fifanakalozana amin’ireo mpanakanto amin’ny toerana andalovana, atrikasa momba ny mozika ho an’ny tanora…
Raha tarafina tamin’ireo andiany teo aloha, karazana kolontsaina sy vakoka samihafa no atambatr’ity tetikasan’ny departemantam-panjakana amerikana misahana ny fanabeazana sy ny kolontsaina (ECA), ary vokarin’ny Found Sound Nation ity. Amin’ny ankapobeny, dia samy mitondra sy maneho ny kolontsaina mampiavaka azy ny mpandray anjara avy amin’ireo firenena 45 ireo, ary anisan’ny manana izany isika malagasy. Mbola manana hatramin’ny zoma izao araka izany ny mpanakanto malagasy hisoratra anarana ao amin’ny tranonkala 1beat.org.